नेपाली काँग्रेसले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्रबाट पत्रकार साहको पाईनल विजय
जनकपुरधाम,जेष्ठ ८ गते । आसन्न स्थानिय तह निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिई पुरै पाईनल विजय भएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नं.२३ का वार्ड अध्यक्ष पदमा दैनिक विश्व जागरण को सम्पादक प्रकाशक राघवेन्द्र्र साह स्वतन्त्रको पुरै पाईनल बिजयी भएको छ । यहाँका समाजिक संस्था गोविन्द सेवा समितिको अध्यक्ष समेत रहनु भएको स्वतन्त्र उम्मेदवार राघवेन्द्र साह ले ८४१ मत ल्याएर निर्वाचित भएको छ । उहाँका निकटत्म प्र्रतिद्वन्दी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी का रामनन्दन साह ले ७५१ मत ल्याएर पराजित भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको अधिकारिक उम्मेदवार रंजित चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवार रावेन्द्र साह भन्दा १६९ मत कम ल्याउनु भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस कार्यसमिति धनुषा बाट टिकट पाउनुभएको रंजित चौधरी ले ६७२ मतमा सिमित हुनुभयो । नेपाली कांग्रेस नगर कमिटि २३ का वाडा सभापति समेत रहनु भएको साह पार्टीको सदस्यता समेतबाट राजिनामा गरेर स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी राघवेन्द्र साह दिनुु भएको थियो । बेला,लादो र बिन्धी गाउँ मिलेर बनेको वार्ड नं. २३ बाट ने.कां.वार्ड समितिले राघवेन्द्र साहको एकल नाम वार्ड सभापति पदको लागि सिफारिश गरेर पठाएको थियो ।
तर,ने.कां. क्षेत्रिय कमिटीको दबाबमा जिल्ला कार्यसमिति धनुषा ले रंजित चौधरीलाई वार्ड अध्यक्ष पदको टिकट भिडाएको थियो । ने.कां वार्ड कमिटीको सिफारिश विपरीत टिकट वितरण भएको विरुद्धमा सम्पूर्ण कार्यसमितिले नेपाली काँग्रेसबाट राजिनामा गर्दै स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका छन ।
जनकपुरधाम– २३ का वार्ड अध्यक्ष पदमा स्वतन्त्रबाट राघवेन्द्र साह ले ८४१ मत ल्याएर निर्वाचित भएको छ । साथै सदस्य पदमा स्वतन्त्रबाट सदस्य पदमा निर्वाचित हुनेमा गंगाराम महतो ले ७३७ मत, मोहिनुदिन राईन ले ६८६ मत, महिला सदस्य विभा ठाकुर ले ८४१ मत र दलित महिला सदस्यमा सकुन्ति देवी ले ७९१ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन ।
2 महीना पहिले 287 Post Views